Sarubhakta | Nepali Stories
Sarubhakta – Lop Jiwan
बाबुआमालाई चुप भई बस्ने आवश्यकता हुदैन, त्यसैले क्रमशः क्रमशः अन्तिम इच्छालाई व्याख्या गरिरहन्छन् ।
“ठीक छ … । तपाईंलाई मानवजीन थेरापी आवश्यक छ ।” चिकित्सक भन्छ । आफ्नो योग्यताको कुनै तहमा अन्योलग्रस्त भई । जब ऊ अस्पताल भर्ना हुन्छ, अन्धाअन्धी बाबुआमाबाट यो कुरा लुकाउन सफल हँुदैन । उनीहरू हाहाकारमा पर्छन् । रुन्छन् । बेस्सरी रुन्छन् । उनीहरूका नदेख्ने आँखाहरूबाट देखिने आँसुका खोला बग्छन् । ऊ विश्वास दिलाउने प्रयास गर्छ, उसको रोग गम्भीर छैन । त्यसैले चिन्ता चिन्ताहीन छ, शोक शोकहीन छ, दुःख दुःखहीन छ । ईश्वरमाथि भरोसा राख्नुपर्छ, जसलाई प्रार्थना गरिन्छ । अन्धाअन्धी बाबुआमा ईश्वरमाथि भरोसा राख्छन् र बलिन्द्रधारा आँसुका प्रार्थना गर्छन् । अस्पतालको शय्यामा साताभरि नै केही फरक कुरा हुन्छ । ऊ अर्थात् छोरा रवि कुनै उपचारमा गुज्रँदैन । कुरो स्पष्ट छ, मानवजीन थेरापी भनेको जीन स्थानान्तरण ९न्भलभ त्चबलकाभच० द्वारा रोगोपचार गर्ने विधि हो र यस्तो पहिलो परीक्षण सन् १९९० मा सुरु गरिएको थियो । रोगीको ब्मभलयकष्लभ म्भamष्लबकभ न्भलभ लाई द्यymउजयअथतभक मा स्थानान्तरण गरेर । किनभने यो सन्जाइमदोष तर्फ लक्षित थियो र अत्यन्त घातकसिद्ध हुन्थ्यो । तर, यहाँ खास रोग पत्ता लागेकै छैन । कुन रोगको उपचार गर्न कुन जीन स्थानान्तरण गर्ने ? अनि कहाँ ?…
मेन्डल, डब्ल्यूएस सूट्टन- जीनका शास्त्रीय धारणाहरू । टीएच मोर्गन- ड्रोसोफिला मेलानो गाष्ट्रकमाथि प्रयोगात्मक कार्य । क्रोकोजोम- त्यो माध्यम, जसबाट वशंानुगत गुणहरू सर्दै जान्छन् एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म । मोर्गनको क्रोमोजोम सिद्धान्त ९ऋचomयकomभ त्जभययथ या क्ष्लजभचष्तबलअभ०- यो धारणा राख्छ कि क्रोमोजोमहरू पृथक् एकाइहरूबाट बनेका हुन्छन्, जसलाई जीन भनिन्छन् ।
“होइन, होइन, त्यसरी नलिनुहोला । विज्ञानको सत्यतालाई भावनामा लिनुहुँदैन ।”
चिकित्सक भन्छ । ऊ केही भन्दैन । उसलाई जे बुझ्नु हुन्छ पहिले नै बुझिसकेको हुन्छ । अर्को दिन अर्थात् भोलिपल्ट जब अन्धाअन्धी बाबुआमा उसको स्वास्नीको सहारा लिई उसलाई भेट्न आइपुग्छन्, ऊ बोल्न अस्वीकार गरिदिन्छ । उनीहरू बुझ्न सक्दैनन् उनीहरूको एक मात्र छोरोलाई के भइरहेछ … ।
के यो वंशानुगत भूलसुधार हो त ? मलाई थाहा छैन । मलाई थाहा छ, त्यस परिवारका दुःख र शोकलाई कुनै शब्दहरूमा बयान गर्न सकिँदैन।
Posted in Sarubhakta
Tagged Literary work of Nepali Story Writer Sarubhakta Literatures of Nepali Story Writer Sarubhakta Nepali Author Sarubhakta Nepali Katha Nepali Katha Lop Jiwan by Sarubhakta Nepali Kathakar Nepali Kathakar Sarubhakta Nepali Rachanakar Kathakar Sarubhakta Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Sarubhakta Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Sarubhakta Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Lop Jiwan by Sarubhakta Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Sarubhakta Sahityakar Sarubhakta Ka Nepali Katha Haru Sarubhakta - Lop Jiwan Sarubhakta's Nepali Story Lop Jiwan